China Plastic syringe ọgwụ ịkpụzi Manufacturer na Supplier | Meste
Medical plastic akụkụ ịkpụzi
Ebu na ịkpụzi ịkpụzi nke sirinji rọba
Sirinji rọba bụ ngwaọrụ ndị eji eme ihe n'ọtụtụ ebe, dịka ọgwụgwọ, ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo, nyocha sayensị na wdg. Sirinji ahụ dị ogologo ma dị njọ, na nkwekọ dị n'etiti sirinji na plunger chọrọ ezigbo ikuku ikuku, sirinji ahụ dị ogologo na dị mkpa, na nkwekọ dị n'etiti sirinji na plunger chọrọ ezigbo ikuku ikuku, n'ihi ya, ọ nwere ihe pụrụ iche chọrọ na ịkpụzi yana ịkpụzi usoro ịkpụzi.
Sirinji bụ ọkpọ nke nwere ọnụ yana piston ma ọ bụ bọlbụ maka ịckingụ na ịmịpụ mmiri mmiri na aghụghọ, maka ihicha ọnya ma ọ bụ oghere, ma ọ bụ iji agịga oghere iji gbanye ma ọ bụ wepụta mmiri mmiri.
A na-eme ka syringe mbụ bụ iko, nke dị oke ọnụ, na-emebi emebi ma na-ebugharị. Ọdịdị nke sirinji rọba nwere ike iwepụta, nke dị mfe ịmepụta, ọnụ ala na ịdị mfe ibu, na-ezere ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa obe ma na-enyere ndị dọkịta na ndị ọrịa aka.
A na-eji rọba sirinji mee plastik ma ọ bụ iko, na-enwekarị ọnụ ọgụgụ na-egosi ọnụọgụ mmiri dị na sirinji ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile. Enwere ike ịgba ogwu sirinji na autoclave. Agbanyeghị, ọtụtụ sirinji ọgwụ ike ọgbara ọhụrụ bụ sirinji rọkọstọn nwere piston rọba n'ihi akara ka mma dị n'etiti piston na gbọmgbọm ahụ, ha dịkwa ọnụ ala ma enwere ike ịtụfu ya naanị otu ugboro.
Ngwa nke sirinji rọba
Na nkà mmụta ọgwụ, a na-eji sirinji iji tinye ọgwụ n'ime akpụkpọ ahụ, arịa ọbara ma ọ bụ ọnya nke ndị ọrịa, ma ọ bụ wepụ ọbara ma ọ bụ mmiri si n'ahụ ndị ọrịa maka nyocha ụlọ nyocha.
Sirinji rọba eji ọgwụ
Mgbe ụfọdụ a na-eji sirinji ọgwụ na-enweghị agịga maka ị oụ ọgwụ ụmụaka mmiri ọgwụ ma ọ bụ anụmanụ, ma ọ bụ mmiri ara ehi nye ụmụ obere ụmụ anụmanụ, n'ihi na enwere ike tụọ ọgwụ ahụ n'ụzọ ziri ezi ma ọ dị mfe ịmịpụ ọgwụ ahụ n'ọnụ onye ahụ kama ịkọgharị isiokwu ahụ. ịụ mmiri si na ngaji e ji atụ ihe.
E wezụga iji ọgwụ, sirinji nwere ike iji ọtụtụ nzube ndị ọzọ. Ọmụmaatụ:
* Iji mejupụta ink cartridges na ink na ogige mmiri.
* Ka ịgbakwunye mmiri mmiri reagent na laabu
* Iji tinye gluu na nkwonkwo nke akụkụ abụọ
* Iji na-eri nri n'ite mmanụ na igwe
* Iji wepu mmiri mmiri
Sirinji rọba eji arụ ọrụ na ụlọ nyocha
Ahụ syringe na-enwekarị akụkụ abụọ: ihe nkedo plastik, gbọmgbọm rọba. Ọ dị ogologo ma kwụ ọtọ. Iji jide n'aka na ọ ga-ekwe omume, a na-ejikarị akụkụ nke oghere dị n'ime oghere gbọmgbọm ahụ dum na akụkụ ya na-enweghị ịbịaru akụkụ, na anaghị anabata nrụrụ. Ya mere, nkedo nkedo na ịkpụzi gbọmgbọm plastik na-achọkarị usoro na nkà pụrụ iche.
Mestech nwere ike ime ihe ogwu ogwu na mmeputa ogwu maka otutu uzo sirinji plastik. Anyị na-atụ anya ịnye gị ọrụ nhazi na mpaghara a.Biko kpọtụrụ anyị.
Nke gara aga: Gịnị bụ plastic ọgwụ igbe
Osote: Imepụta sirinji ọgwụ plastik